Bishnu Rimal's Website » Blog Archive » पूर्वाधारको खाडलमा कान्तिपुर बहस
पूर्वाधारको खाडलमा कान्तिपुर बहस
‘कान्तिपुर इकोनोमिक समिट २०२०’को पहिलो छलफल ‘पूर्वाधारको खाडल’ शीर्षकमा भएको थियो । यो छलफलमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाबीच भएको थियो ।
पूर्वाधार कानुनका जानकार अधिवक्ता सेमन्त दाहालकोसहजीकरणमा गरिएको छलफलको सम्पादित अंश :
निर्माणमा गुणस्तर र ढिलाइ हुनुका तत्वहरु के-के देख्नु भएको छ ? त्यसमा लगानी एक तत्व हो कि होइन ?
कनेक्टिभिटीका लागि रेल, पानीजहाज, सडक सबै कुरा चाहिन्छ । पूर्वाधारको अवरोधमा मैलै तीनवटा कमजोरी देख्छु। पहिलो नीति निर्माण र राजनीति। राजनीतिक नेतृत्व र योजनाकारमा पनि समस्या छ। कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने कर्मचारीतन्त्रमा समस्या देखिन्छ। त्यसपछि ठेकेदारको समस्या पनि देखिन्छ। यो प्रष्फुटित हुनमा मनस्थितिको समस्या पनि छ। विगतमा लोकतन्त्रको लागि लड्यौँ, अहिले प्रक्रियाका लागि लडिरहेका छौँ। प्रक्रिया अहिलेको चुनौती रहेको छ। यसका सकारात्मक पक्ष पनि छन्। अनिमितता पनि प्रक्रियाभित्रै देखिएको छ।
कानुन बनाउने, काम गर्ने र निर्देशन दिने शैली पनि प्रक्रियाकै हिसाबमा रहेको छ। योग्यताअनुसारको काम, कामअनुसारको पारिश्रमिक, पारिश्रमिकअनुसारको परिणाम भन्ने भनाइ छ।मानव संसाधनमा पनि ‘दरबन्दीअनुसार लोकसेवा लड्छौं। योअनुसार पाएको काम सित्तैमा पाएको ठान्छौं। काम नभई दरबन्दीअनुसार तलब पाउछौं’ भन्ने बुझ्छौँ। यसले समयमा काम सक्न समस्या देखिएको छ। अहिलेको स्थिति पनि यही हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘एक्सन रुम भने डिजिटल वे’ बाट मोनिटरिङ गरिरहेका छौं। पूर्वाधारमा खाडल हुनुमा उल्झन र झमेला देखिएको छ। योजना बनाउँदा बिजनेस प्लान बनाउँदैनौँ।
पूर्वाधारको खाडल कसरी पुर्ने ?